Uyini umnyuziyamu ukufa? Iyindawo lapho abantu beze ngenxa okuvelayo elikhanyayo, noma namanje ukufunda okuthile okusha? Noma embukisweni engavamile izivakashi ezinjalo - abantu dream uthinta into le ngale? On the ukufa kungamukelwa ukukhuluma ngokukhululekile. Nokho, kusenomsebenzi omkhulu endaweni nalapho ethola khona ngentshiseko ukukutshela kakhulu. Kuyinto Museum sokufa Petersburg.
Abaningi bathola ukuthi kuvulwe kuzichaya elibuhlungu ngokwanele kulo muzi ongokomfanekiso. Ngempela, Petersburg kanini libalele futhi banobungane, idolobha ngokuvamile belusizi futhi kudabukisa. isimo sakhe ngokuvamile waphawula emibhalweni zefilosofi yakhe, babhali, bahlatiyi, zaveza izwi abaculi upende.
Ngo-2013, idolobha wavula Museum sokufa. Ngemva nje kancane kwalokho, ngo-2014, Umbukiso efanayo elibuhlungu uvele eMoscow ku Novy Arbat. Ngokuthakazelisayo, umsunguli futhi umahluleli kokubili iminyuziyamu Wayengubani u-Alexander Donskoi - lowayeyiMeya ka Arkhangelsk. Ayikho ngaphansi emangalisayo kanye neqiniso lokuthi le ndoda sina futhi negama ezibukeka washiyela umngcwabe ebhokisini lokungcwaba ukuma inhlanzi. Kungani becabanga kanjalo? Izindleko mkhakha nomthelela, ngoba lesi sifiso Aleksandr Donskoy uzwakalise kakade ngemva kokufa iminyuziyamu abo avuleka.
i sifiso engavamile umsunguli ukuvezwa okubili yenza isizathu sokukholelwa ukuthi lezi sobala ekuqaleni shazi embukisweni elibuhlungu empeleni ayibi mibi kangako. Ingabe kuyiqiniso lokhu?
ukufa umsebenzi Museum
Ngezinye Aleksandra Donskogo phambi 2013 wayevele amanye amaphrojekthi ihlazo ngemuva. Ngakho, livula Museum Erotica kanye neziphathimandla Museum. Lesi sakamuva yavalwa ngempumelelo ngesikhathi ekufuna iziphathimandla Petersburg. Wagxekwa futhi project yakhe entsha yokubhala, ngisho izakhamuzi eziningi kubhekwe impikiswano kakhulu.
Aleksandr Donskoy ngokwakhe wathi isimo sengqondo esinjalo njengoba kulandela: Le phrojekthi ayidalwanga ukuze uqhubeke ube uhlobo lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa amnyama noma ukukhuthaza ukuzibulala kwentsha e-edolobheni Petersburg. ukushonelwa Museum eqinisweni - kuba yindawo lapho wonke umuntu ongeza, ethukile kuyini phandle lapho, nangale. Futhi isuka khona ngaphandle kokwesaba anakho wangaphambili ezingaqondakali.
Vumelana umsebenzi kunalokho sina. Futhi nakuba iningi ziphephile Museum kungase kuzwakale kuyindida noma alethe ukumamatheka, eqinisweni, isiko omngcwabo nezinye emazweni kubo ukuhlala sengqondo sina futhi enenhlonipho. Ngakho uyini nokuchaza le Museum?
kokufa Museum itholakala egumbini ekhaya saseNevsky Avenue futhi ithatha amakamelo ezine. Zisekelwa lunikeza indaba ephathwayo emkhathini. Cha, ukuyibiza isimo ukwesaba noma ukwesaba ukuthi ayilungile, kodwa kungaba igama ezithusayo ngokufanelekile.
Esikhathini sokuqala Igumbi izivakashi nge amathambo, sigqoke ulilela ngemvunulo. Lena umakoti wasekhaya nomkhwenyana - amatshwayo wokuhlanganisa ukuthi isithembiso ukuthembeka angunaphakade engakaze kukhanselwe ngemva kokufa kwakhe. Ehholo efanayo obubekwe ngaphambili futhi omngcwabo buso baletha ezivela ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba. Ukuze emashalofini yayo ngesikhathi ngabandayo umbukeli ubukeka ingelosi edabukisayo. Wayebonakala ukwazi ukuthi sonke elinde khona emgqeni wokugcina.
Ngakusasa amakamelo amabili mancane. Babuthela skull anemibala, phakathi lapho singathola ngisho yayihlotshiswe ngamatshe semiprecious. Kukhona futhi ezihlukahlukene tombstones, ngisho amabhokisi engavamile futhi ongaziwa eGhana, e-Afrika. Ziphephile obala kulezi amahholo, ukunikeza umbono ocacile kanjani ukugijima emasikweni emingcwabo ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba.
Ikamelo lokugcina mayelana namasiko isiko aseMpumalanga. Kulapha uhlala umoya sokufa yafunda eHong Kong. Lapha e ingilazi yakhe ethuneni amanga skeleton egqoke imvunulo Samurai.
Kukhona Museum nemibukiso ekhethekile ezisebusweni okusezingeni eliphezulu umphakathi.
I ziphephile photogenic kakhulu
Kulesi Museum ungabona isithombe engavamile. Degrees pair, indoda nomfazi, ezingenzeka ngokuzumayo, ngaphandle kwesizathu emgqeni ukuze uthole ibe lomngcwabo ukuthatha izithombe. Yebo, kukhona lomngcwabo ekhethekile le njongo, futhi, endleleni, abanye izivakashi nje ukuthwebula zihlala isikhathi eside esimweni engavamile, futhi woza Museum sokufa. Photo lapha ngempela musa akuvumelekile. Kodwa lokho ngezinye izikhathi izibani ngempela dim ungakuvumeli ukuba lo msebenzi.
Kule Museum belusizi kungaletha izithombe, ngisho nokufa imbala. It iyakwamukela izivakashi ephasishi Phakathi kwamakamelo futhi ngokuvamile kakhulu ugcina esithombeni.
Okuvelayo zabantu ovakashele Museum sokufa
Yini abantu bethi, nje kokuqalaza embukisweni Museum? Nge lokho okutshelwa imizwelo, abafuni ukuzibopha uma embukisweni? Okuvelayo zihluke kakhulu.
Ezinye izivakashi baye waveza umbono wokuthi into namanje on the show abazange babe. Cishe, lesi zingachazwa ngezinqubo yokuthi kumaphesenti athile izivakashi namanje balindele okukhulu.
Iningi izivakashi ephuma Museum umxhwele. Thinta into le ukudlula lokho kuhlale ezithakazelisayo, futhi kakhulu emkhathini embukisweni udonsa orientation yayo ezingaqondakali. Futhi abaningi beze lapha, yini ngokufa Museum (Petersburg, hhayi eMoscow), ukuzizwa emkhathini lokhu nokuzola ongaqondakali futhi kudabukisa.